Brody PR: ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးကုမ္ပဏီကိုဘယ်အချိန်မှာပစ်ချမလဲ Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, သြဂုတ်လ 19, 2009 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒီနေ့ကျွန်တော်ရာဂဏန်းလောက်ရှိတဲ့သြဇာညောင်းတဲ့ဘလော့ဂါတွေ၊ စာနယ်ဇင်းသမားတွေနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်က Beth Brody ဆီကမလိုချင်တဲ့အီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ် (beth@brodypr.comအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် E-Book အသစ်ထုတ်ဝေရန် Jump Start Social Media အကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသည်။
၎င်းသည် SPAM ဖြစ်ကြောင်းမလုံလောက်ပါ၊ အခြားသူများ၏နာမည်နှင့်အီးမေးလိပ်စာကိုလက်ခံရရှိသူများ၏စာရင်းကိုလည်းပွင့်လင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ အစဉ်အဆက်၏ကြား၏ BCC?
ငါဗက်ကိုမသိဘူး၊ မသိဘူး Brody PR, ဒါပေမယ့်ငါသူတို့, သူတို့အလားအလာများနှင့်ဖောက်သည်များအားလုံး, သူတို့ကလက်ရှိရရှိသောကြီးမားတန်ပြန်ထိုက်ကြောင်းသူတို့ကိုသိစေပါလိမ့်မယ်။ ထင်ရှားသောစက်မှုလုပ်ငန်းမှလာသည့်အကြီးအကျယ်အီးမေးလ်ပို့ခြင်း (ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည်) မှတုန့်ပြန်မှုတစ်ခုမှာ (အားလုံးအားပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း)
ဒီထွက်သွား။ ၏လူစာရင်း ဘယ်သူလဲ သြဇာ၏။ ငါလုပ်လိုက်တာငါချော့မော့နေစဉ် အ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးကုမ္ပဏီတခုကကျွန်တော်တို့ကို spam လုပ်ဖို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းစာရင်းကိုစုစည်းမယ်လို့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူး။ Jump Start Social Media E-Book သည်ကောင်းမွန်သော e-book တစ်ခုဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သေချာပါသည်။ သို့သော်သူတို့၏ PR ကုမ္ပဏီမှကျွန်ုပ်အား spam လုပ်ခြင်းကြောင့် download ကိုကူးယူခြင်း၊ ချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုလုပ်ရပါ။
ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးကုမ္ပဏီများသည်စက်မှုလုပ်ငန်းရှိမည်သူမဆိုထက်မလိုလားသောအီးမေးလ်များ၏သက်ရောက်မှုနှင့်ဤ spam လောကတွင်ခွင့်ပြုချက်အခြေခံသောဆက်သွယ်ရေး၏အရေးပါမှုကိုအသိအမှတ်ပြုသင့်သည်။ ငါ့မှာကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာအဆက်အသွယ်ပုံစံရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ရှေးရှေးတွေကငါ့ကိုလိုင်းချပေးနိုင်တယ်။ အဲဒါက PR ကုမ္ပဏီတစ်ခုကငါနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲ။ ငါဆက်သွယ်တဲ့အခြားလူမှုကွန်ရက် ၈၀ ကတဆင့်။ ဤသည်မှာရိုးရှင်းစွာပျင်းရိ PR၊
ယခုကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုဘုရားသခင်သိသောသူလက်သို့ရောက်သည်။ အကြောင်းမှာ PR အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကစည်းကမ်းချက်များအားလုံးကိုမေ့နေသောကြောင့်ဖြစ်သည် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး။ ကြင်ကြင်နာနာဖြင့်ယခုကြည့်ဖို့သူတို့၏အီးမေးလ်ကိုငါထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သင်သည်သင်၏နောက်ထပ်မြှင့်တင်ရေးကိုရသောအခါ Beth မှတ်စုတစ်ခုချန်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့် - သူတို့သည်၎င်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
Brody ကိုလည်းရှည်လျားသောစာရင်းထဲသို့ထည့်သွင်းလိမ့်မည် PR Spammers by Gina trapani။ Brody သည် CAN-SPAM လုပ်ရပ်အားချိုးဖောက်မှုအတွက်လူတန်းစားဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုကိုရင်ဆိုင်ရန်ရှိ၊ မရှိကိုသူတို့ကအံ့အားသင့်စရာဖြစ်စေသည်။
နောက်တစ်ခါတွင် PR ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုသင်ငှားရမ်းမည်ဆိုပါက၎င်းတို့သည်စျေးကွက်တွင်သြဇာသက်ရောက်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများနှင့်၎င်းတို့နှင့်မည်သို့ချဉ်းကပ်ရမည်ကိုရှာဖွေပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည် Brody PR ကဲ့သို့ဆိုပါကသူတို့ကိုမငှားပါနှင့်။ သူတို့ကမရကြဘူး သင့်မှာ spamming တွေပါတဲ့ Brody PR လိုကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိရင်သူတို့ကိုပစ်ပါ။ သူတို့သည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်ကောင်းသောအရာထက်ပိုမိုသောပျက်စီးမှုများကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ထပ်ဆောင်းစာဖတ်ခြင်း - PR ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုအီးမေးလ်တစ်ခုတည်းကဘယ်လိုသတ်ခဲ့သလဲ, ငါတောင်းပန်တန်ဖိုးထားကြလိမ့်မယ်, ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးပျက်ကွက်: သင်ခန်းစာနှင့် rant ... ငါလာမယ့်ပိုပြီးရှိပါတယ်သေချာပါတယ် ...
UPDATE: 8/21/2009 ယနေ့ဗက် Brody မှ snafu အတွက်တောင်းပန်သည်ကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိသည်။ Beth သည်မကြာမီလာမည့် 'သင်ခန်းစာယူထားသော' ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိသည်။
အရေးကြီးသောမွမ်းမံမှု - ၁၀/၁၉/၂၀၀၉ အခြား Brody PR မှမှတ်စုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပို့စ်တွင်အမှားအယွင်းများရှိခဲ့ကြောင်းမှတ်ချက်ချသည်။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့တောင်းပန်ပါတယ်နှင့်လင့်များကို update လုပ်ပါပြီ။
Tags: လှူဒါန်းရန်App ကြော်ငြာများတွင်kernစာစီစာရိုက်
20:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 12, 17
Brody PR ရဲ့အကောင်းဆုံးအပိုင်းကသူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါပထမဆုံးမြင်ရတာကသူတို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ပုံသဏ္withာန်က "သြတ္တပ္ပစိတ်ရှိသည့်အေဂျင်စီ ... "
အဲဒါ Irony မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငါဘာလဲဆိုတာငါမသိဘူး။
20:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 1, 17
Doug - ဤကဲ့သို့သောအရာများကိုပြုလုပ်သောသူများသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်မိမိကိုယ်ကိုအရေးပါမှုရှိသည်။ သူမဖောက်သည်စာရင်းကိုကြည့်ပါ။ မင်းသဘောမကျဘူးလား သင်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုခဲ့သော်လည်းသူမပြောရန်မှာအမြဲအရေးကြီးသည်၊ အလွန်တောက်ပသောကြောင့်သူမသည်သင့်ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ရောက်ရှိနေခြင်းကိုသင်သဘောကျမည်မှာသေချာသည်။
20:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 1, 42
ဒီပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Doug ။ ၄ င်းတို့သည်အများပြည်သူနှင့်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်လျှင်၊ မီဒီယာနှင့်ဆက်နွယ်သည်။ ထို့နောက်၎င်းတို့သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာဆက်ဆံရေးရှိသင့်သည် (လွှမ်းမိုးသူများအောက်ကျသင့်သည့်ထီး) ။ ဤသုံးခုကိုတစ်ပေါင်းတည်းဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်လျှောက်လုံးတသမတ်တည်းကျရှုံးခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီအများစုသည်၎င်းကိုမရရှိနိုင်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်သည့်အထောက်အထားဖြစ်သည်။
20:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 2, 38
သင်ပထမ ဦး ဆုံးလိုင်း၌သင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုခဲ့ကြသည်ထင်သောသင်ကျဆင်းသွားသည်လမ်းကိုအမှန်တကယ်ချောမွေ့
20:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 5, 59
Brody PR ကို # ပျက်ကွက်
20:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 6, 15
wow - ဟုတ်တယ်၊ ဒါကကြီးမားတဲ့ f-up ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကထပ်ခါတလဲလဲအမှားမလုပ်မိရင်သင်သံသယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုတကယ်ပေးသင့်တယ်။ လူတွေကတစ်ခါတလေအမှားတွေလုပ်တတ်ကြတယ်။ တစ်စုံတစ် ဦး သည်တစ်နေ့တာအမှားပြုလုပ်တိုင်းမင်းခေါင်းကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမင်းနောက်မှ lynch လူအုပ်စုကိုခေါ်သွားလျှင်ကော။ ဤရာထူးသည်အေဂျင်စီနှင့်ပြည်သူ့ ၀ န်ထမ်းများထံမှလူသိရှင်ကြားကဲ့ရဲ့ခြင်းမရှိဘဲထိရောက်စွာကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့သည်။ ရှင်းနေသည်မှာသင်သည်ဒေါသထွက်နေသောနှင့်စစ်သွေးကြွဖြစ်ရန်သင့်အတွက်ဆိုးသောနေ့ရက်တစ်ရက်ရှိနေရမည်ဖြစ်သည်။
21:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 2, 56
ငါသဘောမတူဘူး တကယ်တော့ငါထင်သည်ဤ post ကိုမသင့်လျော်စွာကြမ်းတမ်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်တန်း၏, ထိုမိန်းမသည် BCC သိတယ်။ သူမသည်အမှားတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။ CC နှင့် BCC လိုင်းသည်အချင်းချင်းနှင့်မီလီမီတာသာကွာဝေးသည်။
သင် Bro Brody နှင့် Brody PR တို့ကိုမသိကြောင်းသင်ဝန်ခံသည်။ ခင်ဗျားဒီ post မှာပြောခဲ့တာတွေကိုသူမမျက်နှာကိုပြောပြနိုင်မလား။ သူမရှေ့မှောက်သူမ၏အမှုသည်ကို BCC လိုင်းတွင်လူများထည့်သွင်းခြင်းမပြုရန်အမှားပြုမိသောကြောင့်သူမသူမကိုပစ်ခတ်သင့်သည်ဟုသင်ပြောနိုင်ပါသလား။ ငါမင်းကိုမသိဘူး၊ ဒါကြောင့်အဲဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုငါမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါသိချင်တယ်။
ဤသည်ပိုဆိုး spam ကနေဝေး။ spam အစစ်အမှန်မရဘူးလား။
ဤမိန်းမသည်ရိုးသားသောအမှားတစ်ခုကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးတုံ့ပြန်မှုမှာလုံးဝမသင့်လျော်ပါ။ သင်သုံးတဲ့ကိုးကားချက်အပါအဝင်တုန့်ပြန်တဲ့သူအားလုံးကသူတို့ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိတယ်။ သူတို့ကသတိရှိရှိ၊ ပြီးတော့ငါဒီဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပျက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသေချာပါတယ်။ ငါရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးတပုဒ်မှာမင်းရဲ့အကြံအစည်တွေကိုသိချင်တယ်။
လူမှုမီဒီယာ "ဂုရု" နှင့်ဘလော့ဂါများသည်အတ္တဆန်သောလူရှုပ်များဖြစ်သည်
အကယ်၍ သင်အမှန်တကယ် PR စနစ်ကျရှုံးခြင်းဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုလိုချင်ပါကဤအကြောင်းကိုဖတ်ပါ။ ၎င်းသည်ဖောက်သည်သည်နောက်ဆုံးတွင်လုံးဝမှေးမှိန်သောပြောင်းရွှေ့မှုဖြင့် ၀ င်ရောက်သည့်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
ဟေ့ PR၊ ဘလော့ဂါတွေဟာအသုံးမပြုတဲ့ကိရိယာတွေမဟုတ်ဘူး
UPDATE: မကောင်းတဲ့ PR အတွေ့အကြုံ။ PR ကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်သည်အလွန်ရှက်ဖွယ်ကောင်းသည်။
21:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 4, 59
၁။ ငါ dspark ၏ဤဆိုးရွားလှသည့်အဖြစ်အပျက်များကိုအစပြုမပေးခဲ့ပါ။ ငါကတုံ့ပြန်ခဲ့ရတယ်။
၂။ ဤသည်မှာအများပြည်သူနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကသူတို့ရဲ့အလုပ်ပါ၊ ခြေထောက်မှာမတော်တဆဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့လူနာတစ်ယောက်ကဆရာဝန်ကိုစိတ်ဆိုးမနေသင့်ဘူးလားလို့မေးတာနဲ့တူတယ်။
ဤသည်မှာရိုးသားသည့်အမှားမဟုတ်ပါ - ဤစာရင်းကိုအတူတကွထားရန်လများစွာယူရပြီး၎င်းတို့ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ငွေပေးချေခြင်းခံရသောသူတို့၏ဖောက်သည်များရှိသည်။ ၎င်းသည်မရိုးသားပါ၊ ၎င်းသည်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည် - မကောင်းမှုနှင့်လှည့်စားခြင်းနှစ်မျိုးလုံး
22:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 11, 44
ဒေါက်ဂလပ်မည်သည့်အမှားမျိုးမှမကျူးလွန်မိရန်သင့်အတွက်အလွန်လေးလံရမည်။ PR အတွက်အမှားမလုပ်မိဖို့မမှားနိုင်တဲ့အတွက်သင့်ကိုကျွန်တော်ချီးကျူးပါတယ်။
ဒါနဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပါ ထိပ်ဆုံးနှင့်မလိုအပ်သောအရာများရှိသော်လည်း၊ အခြားပို့စ်များထက် ပို၍ သွားရန်လိုအပ်သည်ဟုသင်ခံစားခဲ့ရပေမည်။
23:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 4, 46
ငါအမှားမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ ငါအမှားလုပ်မိသောအခါ, ငါဂယက်ရိုက်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့မှာဂယက်ရိုက်ခတ်မှုတွေမရှိခဲ့ရင်ဒါဟာအမှားတစ်ခုလို့ငါတို့မသိဘူးမဟုတ်လား။ ငါမစ္စ Brody နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ Business Blogging ဆိုင်ရာကျွန်ုပ်၏ ebook ကိုပို့ပြီးသူမအားကုမ္ပဏီအားသူမလိုအပ်သမျှကိုကူညီရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
သြဂုတ် 24, 2009 မှာ 5: 45 AM
21:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 9, 20
Doug အကြောင်းကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တွင်အခွင့်အရေးရှိပါကမစ္စ Brody နှင့်အလားတူအရာများကိုတိုက်ရိုက်ပြောလိမ့်မည်။
ငါထင်တာကတကယ်တော့ရိုးရှင်းတဲ့ spam တွေထက်ပိုဆိုးတယ် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးကုမ္ပဏီများသည်ကြော်ငြာသူများမဟုတ်ကြပါ။ ၎င်းတို့သည်ပရိသတ်များကိုမည်သည့်မက်ဆေ့ခ်ျများနှစ်သက်မည်နည်း၊ မည်သည့်နည်းများကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေမည်ကိုသိသောကျွမ်းကျင်သောဆက်သွယ်ပြောဆိုသူများဖြစ်သင့်သည်။ မည်သူမဆိုသတင်းစကားတစ်ခုမှန်မှန်ကန်ကန်ပျက်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမည်ကိုသိသင့်သည်ဆိုပါက၎င်းသည် PR ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
23:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 4, 47
ငါအခွင့်အလမ်းရှိခဲ့တယ်။ ဗက် Brody ကအီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးသူမရဲ့ဘလော့ဂ်အသစ်ဖြစ်တဲ့သင်ခန်းစာများသင်ယူခြင်းတွင်ငါ့ဘလော့ဂ်ကိုကိုးကားရန်ကျွန်ုပ်၏ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခဲ့သည်။ ထိုအခါငါတရားဝင်တောင်းပန်တောင်းဆိုခဲ့ - ကလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ငါ Brody မစ္စဒီဒီမှပြန်လည်ထူထောင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
21:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 7, 55
ငါ BCC အဘို့အဘယ်သို့ဆိုင်ဘယ်သူမှသိတယ်စဉ်းစားလေ့ရှိတယ် TO: နေရာမှာ (တစ်ခါတစ်ရံ) Indiana ပြည်နယ်ပြည်နယ်ရှိမီဒီယာတိုင်း၏အမည်များနှင့်အီးမေးလ်များကိုရေဒီယိုမှ (များသောအားဖြင့်အင်ဒီယားနားပြည်နယ်ရှိမီဒီယာတိုင်း၏အမည်များနှင့်အီးမေးလ်များကိုမကြာခဏ) နှင့်အတူ (တခါတရံ) ရာနှင့်ချီသော e-mail လိပ်စာများနှင့်အတူတစ်နေ့လုံးသတင်းများနှင့် PR ထုတ်ပြန်ချက်များရရှိသည်။ တီဗွီကိုပုံနှိပ်ဖို့၊ အများစုကသူတို့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုလူသိရှင်ကြားမပို့ချင်ကြဘူး။ ဒါကဖက်ဒရယ်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တယ်လို့ငါမပြောခဲ့ဘူးလား။ )
အီးမေးလ်လက်ခံရရှိသူကိုလက်ခံသူများအားအသိပေးရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရည်ရွယ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ပထမ ဦး စွာ ၄ င်းသည်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏စွပ်စွဲချက်အတိုင်းအတာကိုကြီးမားသောပရိသတ်ကိုသရုပ်ပြခြင်းအားဖြင့်ပေးပို့သူ၏အရေးပါမှုကိုတိုးစေသည်။ ဒါ့အပြင်အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သူကပစ္စည်းကိုအသုံးပြုဖို့လက်ခံသူကိုသိမ်မွေ့တဲ့ (ဒါမှမဟုတ်သိပ်မသိသာတဲ့) ဖိအားပေးတယ်။ နောက်ဆုံးတွင်ဤသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောသူအားလုံးသည်အကြောင်းအရာကိုလက်ခံပြီး၎င်းကိုသုံးကောင်းသုံးလိမ့်မည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်လည်း၎င်းကိုအသုံးပြုသင့်သည်မဟုတ်လော။
အဓိကအချက်ကတော့သူမကသင့်ကိုဒီအကြောင်းကိုပြောဖို့သေချာစေတယ်မဟုတ်လား။ သင့်ဘလော့ဂ်ကိုလူဘယ်နှစ်ယောက်ဖတ်ပြီးပေးထားသောလင့်ခ်ကိုနှိပ်လိုက်သည်ကိုလူဘယ်နှစ်ယောက်စဉ်းစားရမည်နည်း။ နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းပြောနေတာကဘာလဲ "လူသိရှင်ကြားမကောင်းတာကဘာမှမလုပ်တာထက်ပိုကောင်းတယ်။ ငါ့နာမည်ကိုစာလုံးပေါင်းပြတာပဲ" သင်ငါးစာ, ချိတ်လိုင်းနှင့်နစ်မြုပ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ထိုသဘောမျိုးဖြင့်သူမအလုပ်ကိုအမှန်တကယ်ကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့သည်။
24:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 12, 46
ဒါကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကဖောက်သည်မဟုတ်ဘဲ Brody အကြောင်းပြောနေတယ်။ ဒါကပြaနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်!
21:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 9, 12
ဤအရာကိုကျွန်ုပ်တို့၏တုံ့ပြန်မှုမှာ - http://www.slaughterdevelopment.com/2009/08/19/th...
25:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 8, 39
BCC ကိုပျက်ကွက်ခြင်းသည်အလွန်ဆိုးရွားသည့် ATD ၏ကျဆင်းမှုဖြစ်သော်လည်း PR ၌မူမီဒီယာအဆက်အသွယ်များသို့သတင်းဖြန့်ချိမှုကိုအကြီးအကျယ်ပေးပို့ရန်လိုအပ်သည် - ၎င်းသည်အသစ်အဆန်းဖြစ်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းသက်ဆိုင်သူအားလုံးကို၎င်းကိုသင်ရနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခြင်းအပေါ်မင်းရဲ့ဒေါသကိုငါနားလည်တယ်၊ မင်းအဲဒီလိုခံစားမိတာမှန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်၊ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်အနေနဲ့၊ သူတို့ဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါသတင်းဆောင်းပါးတွေအကြောင်းမင်းသိမှာမဟုတ်ဘူး၊ မေးလား
ငါပြည်နယ်များနှင့်မည်သို့တူကြောင်းငါမသိ, ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာအင်္ဂလန်မှာစာနယ်ဇင်းသမားတွေကမီဒီယာဒေတာဘေ့စ်တွေမှာမှတ်ပုံတင်ထားတယ်။ ဒါမှသူတို့ကသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့လူတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပို့နိုင်တယ်။ ဘာမှားလဲ
25:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 8, 45
ထို့အပြင်၎င်းသည်ငယ်ရွယ်သောအကောင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်၊ PR တွင်စဖွင့်ပြီးအမှားတစ်ခုပြုလုပ်မိနိုင်သည်။ သငျသညျသူမ၏လုံးဝပျက်စီးပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်သင်သည်ဤမျှရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း အနည်းဆုံးတော့သူမရဲ့အမှားဟာအပြစ်မဲ့သူပါ။
မီဒီယာ Atlas, Vocus, Cision (သို့) အခြားမီဒီယာဒေတာဘေ့စ်ကိုသွားပြီး၊ ဂျာနယ်လစ်များ၊ ဘလော့ဂါများ၊ အယ်ဒီတာများ၊ ထုတ်လုပ်သူများစာရင်းကိုဆွဲယူနိုင်တယ်။ မနေ့ကလူ ၂၂၇ ယောက်ကိုသတင်းပေးပို့လိုက်တယ်။ ဒီနေ့သူတို့အားလုံးကိုသုံးချင်လားဆိုတာကိုဖုန်းခေါ်နေတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူနှင့်အင်တာဗျူးများ၊ အဲဒါမှားလား မဟုတ်ဘူး။ ကိစ္စတွေအလုပ်လုပ်ပုံပဲ။ သူတို့သိတယ်၊ ငါသိတယ်၊ ဘယ်သူမှမလုပ်ချင်ကြဘူး
25:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 9, 54
PRMira၊ သူတို့လုပ်ခဲ့တာတွေ၊ သင်လုပ်နေတာကအမေရိကန်မှာတရားမဝင်ဘူး။ opt-out ယန္တရားကိုသင်ထောက်ပံ့ရမည်။ မဟုတ်လျှင်သင်သည် CAN-SPAM ၏လုပ်ရပ်အားချိုးဖောက်နေသည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီကိုစွန့်စားသောအရာများဖြစ်ကြောင်းသင်သဘောပေါက်ပါသလား။ သင့်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ opt-n ​​တစ်ခုထားပါ၊ လူများခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သင့်လျော်သောနည်းလမ်းကိုအီးမေးလ်လိပ်စာများစုဆောင်းပါ။ ကျွန်ုပ်၏ Verizon ကြိုးမဲ့ BlackBerry မှပေးပို့သည်။
သြဂုတ် 28, 2009 မှာ 11: 38 AM
ငါဟာကုမ္ပဏီကိုစွန့်စားမှာမဟုတ်ဘူး၊ အကြောင်းကတော့ဂျာနယ်လစ်တွေကသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုပေးပို့တာကိုနှစ်သက်တယ်။ PR စနစ်သည်ဤနည်းဖြင့်လူအများစု၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုနှစ်သက်ကြသည်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များလက်ခံရရှိသူများပါ ၀ င်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံသင်က၎င်းနှင့်မသက်ဆိုင်သောသူထံပေးပို့နိုင်သည်။ ထို့နောက်သူတို့ကသင့်ကိုတောင်းပန်သည်၊ တောင်းပန်သည်၊ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမှထိုဘလော့ဂ်ကိုရေးသားခဲ့သည်မဟုတ်ပါ။
သိသာထင်ရှားတဲ့ငါပြည်နယ်များအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအကြောင်းကိုမသိသော်လည်း, Vocus, Cision, စသည်တို့, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အလုပ်လုပ်ကြသည် (သူတို့ကအမေရိကန်ကုမ္ပဏီများမှဖြစ်နိုင်သည်ထင်), ငါကအရမ်းကွဲပြားခြားနားလွန်းမစဉ်းစားနိုင်ပါ။ သင်ကသင်မုန်းတီးရေးသင်ခန်းစာမှာမုန်တိုင်းတစ်ခုဖန်တီးနေတယ်ထင်တယ် သူမသည်သူမအားသင်လိင်တံတိုးပွားစေနိုင်သောဆေးပြားများသို့မဟုတ်သင်၏ဘဏ်အချက်အလက်များကိုတောင်းခံရန်အီးမေးလ်တစောင်ပေးပို့ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်စစ်မှန်သော PR စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်သူမအနေဖြင့် BCC ကိုပျက်ကွက်ခြင်းဖြင့်အနည်းငယ်နစ်မြုပ်ခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့အလွန်အကျွံတုံ့ပြန်မှုဘို့မလိုအပ်ရှိပါတယ်။
28:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 2, 30
28:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 11, 09
PR စနစ်သည်ဤသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်မမှန်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် PR ကုမ္ပဏီအမြောက်အများနှင့်ဆက်ဆံရေးရှိသည်။ သူတို့သည်စျေးကွက်အတွင်းသြဇာသက်ရောက်သူများ၏အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုသူတို့၏ခွင့်ပြုချက်မရဘဲစုဆောင်းပြီး SPAM များကိုမလုပ်ပါ။ ငါသည်သင်တို့၏နည်းဗျူဟာများပြန်လည်စဉ်းစားရန်သင့်အားအလွန်အမင်းအကြံပြုလိမ့်မယ် သင်၏ဖောက်သည်များအတွက်ရလဒ်များကိုသင်ရကောင်းရလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းခွင့်ပြုချက်အခြေခံသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိရန်အလားအလာမှာများစွာသာလွန်သည်။
စပမ်နှင့်ပတ်သက်သော UK ဥပဒေများကိုလည်းဖတ်ပါရန်အကြံပေးလိုသည်။ "ကော်ပိုရေးရှင်းများကိုအီးမေးလ်များနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းကိုချဉ်းကပ်နိုင်သော်လည်းဤဖြစ်ရပ်များတွင်အီးမေးလ်များတွင်မူပယ်ဖျက်သောအပိုဒ်ပါရမည်။ "